MB 2017 Desambra - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse eran'izao tontolo izao
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2017 Desambra
Ny niteraky ny virijin'i Jesôsy dia nanazava fa ny Zanak'Andriamanitra dia tonga olombelona tanteraka nefa mijanona ho misy azy - ilay Zanak'Andriamanitra mandrakizay. Ny hoe ny renin'i Jesosy, Maria dia virjiny dia famantarana fa tsy ho bevohoka amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra na fandraisan'anjara olombelona izy. Ny fahatsapana an-jaza tao an-kibon'i Maria dia avy amin'ny asan'ny Fanahy Masina, izay nampifandray ny toetran'i Maria tamin'ny toetra maha-zanak'Andriamanitra. Ary ny Zanak'Andriamanitra dia nandray ny fisiany olombelona rehetra: hatramin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fahafatesana ka hatramin'ny fitsanganana sy fiakarana ary miaina mandrakizay amin'ny maha-olombelona be voninahitra azy.
Misy ny olona manao fihomehezana ny finoana fa fahaterahan'Andriamanitra ny fahaterahan'i Jesosy. Ireo skeptika ireo dia manambany ny firaketana an-tsoratra sy ny finoantsika azy io. Hitako fa tsy mitovy hevitra ny fanoherana azy ireo, satria na dia heveriny ho tsy fihoaram-pefy aza ny fahaterahan'ny virijiny, dia mametraka ny dikan-janany manokana momba ny fahaterahana izy ireo mifandraika amin'ny fanamafisana roa:
1. Milaza izy ireo fa nipoitra avy tamin’ny tenany, avy tamin’ny tsy misy, izao rehetra izao. Ny tiako tenenina dia zontsika ny miantso an'io fahagagana io na dia lazaina aza fa tsy nisy fikasana na tanjona. Raha dinihina akaiky ny fanondroana azy ireo ho tsinontsinona, dia hita fa nofinofy sodina izany. Ny tsy misy azy ireo dia nofaritana ho toy ny fiovaovan'ny quantum amin'ny habaka banga, bubble cosmic na fanangonana tsy manam-petra an'ny multiverse. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mamitaka ny fampiasan'izy ireo ny teny hoe tsy misy, satria feno zavatra ny tsy misy azy ireo - ilay zavatra nipoiran'izao rehetra izao!
2. Milaza izy ireo fa avy amin’ny tsy manana aina no nipoiran’ny aina. Amiko io filazana io dia "nalaina" lavitra noho ny finoana fa teraka tamin'ny virjiny i Jesosy. Na dia eo aza ny zava-misy voaporofo ara-tsiansa fa ny fiainana dia avy amin'ny fiainana ihany, ny sasany dia mino fa ny fiainana dia avy amin'ny lasopy tsy misy aina. Na dia nilaza aza ny mpahay siansa sy ny mpahay matematika fa tsy azo atao ny fisehoan-javatra toy izany, ny sasany dia mahita fa mora kokoa ny mino fahagagana tsy misy dikany noho ny tena fahagagana momba ny fahaterahan’i Jesosy virjiny.
Na dia misolo tena ny modely fiterahana virjiny aza ny olona misalasala, dia heverin'izy ireo ho lalao mendrika ny hanesoana ny Kristiana satria mino ny fahaterahan'i Jesosy virjiny, izay mitaky fahagagana iray avy amin'andriamanitra manokana izay manjaka amin'ny zavaboary rehetra. Tsy tokony heverina ve fa ireo izay mahita ny fahatongavana ho tsy tonga nofo ary tsy azo tanterahina dia mampihatra fenitra roa samihafa?
Mampianatra ny Soratra Masina fa famantarana mahagaga avy amin’Andriamanitra ny fahaterahan’ny virijiny (Isa. 7,14) izay natao hanatanterahana ny fikasany. Ny fampiasa matetika ny anaram-boninahitra hoe “Zanak’Andriamanitra” dia manamafy fa i Kristy dia notorontoronina sy naterak’ny vehivavy (ary tsy nisy lehilahy nandray anjara) tamin’ny herin’Andriamanitra. Nohamafisin’ny apostoly Petera fa tena nitranga tokoa izany: fa tsy nanaraka anganongano be dia be izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fihavian’i Jesosy Kristy Tompontsika; fa izahay efa nahita ny voninahiny ho anay (2. Petera 1,16).
Ny fijoroan'ny vavolombelon'ny apostoly Petera dia manome fandinihana mazava sy voamarina tsara momba ny fitenenana rehetra fa ny fitantarana ny nahaterahany, anisan'izany ny virijiny naterak'i Jesosy, dia angano na angano fotsiny. Ny zava-misy momba ny fahaterahan'ny virjiny dia manaporofo ny fahagagana amin'ny fiheverana mahatalanjona amin'ny alàlan'ny zavatra noforonin'Andriamanitra manokana sy nahary manokana. Ny nahaterahan'i Kristy dia voajanahary sy mahazatra amin'ny lafiny rehetra, anisan'izany ny vanim-potoana nahabevohoka olombelona tao an-kibon'i Maria. Mba hahafahan'i Jesosy manavotra ny lafiny rehetra amin'ny fisian'ny olombelona dia tsy maintsy miaritra amin'ny zava-drehetra izy, handresy ny fahalementsika rehetra ary hamerina indray ny maha-olombelona antsika hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany. Mba hanasitran'Andriamanitra ny fahasimban'ny ratsy teo anelanelan'izy sy ny olona, ​​tsy maintsy nesorin'Andriamanitra tao am-pony ny zavatra nataon'olombelona.
Mba hihavana amin'Andriamanitra amintsika, tsy maintsy ho avy izy, hanambara ny tenany, hikarakara antsika, ary avy eo hitarika antsika ho azy, manomboka amin'ny fototry ny fisian'ny olombelona. Ary izay indrindra no nataon'Andriamanitra tao amin'ny Zanaka Mandrakizay. Raha nijanona ho an'Andriamanitra tanteraka, dia tonga iray amintsika tanteraka izy, mba hananantsika fifandraisana sy fifandraisana amin'ny Ray, ao amin'ny Zanaka, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ilay mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia manondro an'io fahamarinana mahatalanjona io amin'ireto teny ireto:
Koa satria nofo aman-drà ny zaza ankehitriny, dia nandray izany koa Izy, mba handraisana ny fahefana amin’izay manana fahefana amin’ny fahafatesana, dia ny devoly, amin’ny fahafatesany, ka hanavotra izay rehetra natahotra ny fahafatesana amin’ny tenany rehetra. tsy maintsy ho mpanompo ny fiainana. Satria tsy ny anjely no karakarainy, fa ny taranak’i Abrahama. Koa amin’izany dia tsy maintsy tonga tahaka ny rahalahiny amin’ny zavatra rehetra Izy, mba ho Mpisoronabe mamindra fo sy mahatoky eo anatrehan’Andriamanitra mba hanonitra ny fahotan’ny olona (Heb. 2,14- iray).
Tamin’ny fiaviany voalohany, ny Zanak’Andriamanitra tao amin’ny tenan’i Jesoa avy any Nazareta dia Imanoela ara-bakiteny (Andriamanitra miaraka amintsika, Mat. 1,23). Ny nahaterahan’i Jesosy tamin’ny virjiny dia nanambaran’Andriamanitra fa hamboariny ny zava-drehetra eo amin’ny fiainan’ny olombelona hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany. Amin’ny fiaviany fanindroany, izay mbola ho avy, Jesosy dia handresy sy handresy ny ratsy rehetra amin’ny fanafoanana ny fanaintainana sy ny fahafatesana rehetra. Hoy ny apostoly Jaona: Ary hoy Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana: Indro, havaoziko ny zavatra rehetra (Apokalypsy 2.1,5).
Hitako ireo lehilahy efa nitomany izay nahita ny fahaterahan'ny zanany. Indraindray isika dia miresaka momba ny "fahagagana fiterahana". Manantena aho fa hitanao ny fahaterahan'i Jesosy ho fahagagana ny fahaterahan'ilay olona "tena manamboatra ny zava-drehetra".
Andao hankalazantsika ny fahagagana nahaterahan'i Jesosy.